mhuka nezvirimwa | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: mhuka nemiti
Kuchengetedza nekugadzirisa kwemakumbo Ahatin
African Achatina hozhwa ndeimwe yemahombekombe makuru munyika. Kureba kwemakona uku kunogona kusvika kusvika pamasendimita makumi matatu. Iyo nzvimbo yakapararira inyika dzine mamiriro ekunze anotonhora. Kana uri wako ...
Kuchengeta misungo yeAchatina kumba
Katsi, imbwa, uye makonzo maduku mhuka dzinovaraidza dzinodiwa. Vanorerwa mudzimba uye dzimba, zvisinei nemafashoni maitiro. Asi fashoni inoonekwa pana Achatina nedzimwe mhuka dzinovaraidza ...
Achatina hozhwa - inoshamisa mhuka kubva kuAfrica - kuchengetedza, kubereka, kugadzirisa
Kana iwe uchifanira kushandisa yakawanda yenguva kubasa, asi panguva imwechete iwe unonyatsoda kuve neinenge imwe mhuka pamba. Kana kuchengeta imbwa kuri "kusingagamuchirike hunhu", uye ese marudzi emakonzo anoita kunge "banal". Paunoda ...
Ndekupi inobata ruzivo kukura muRussia?
Eucalyptus inokura kupi muRussia? Ari kukura zvechokwadi here? Kune akawanda muAustralia. Vanokura ipapo. Uye pano, kana paine, saka mune rimwe gadheni rebhodhoro, rinofanirwa kuve ...
Zvinokwanisika here kuchengeta dzimba dzemakati neshiri panguva imwe chete?
Katsi neshiri zvinogona kuchengetwa pamba panguva imwe chete here? Kwemakore mazhinji isu taive nekanari muchizarira nekatsi. Iye haana kana kumunetsa, asi kazhinji aingogara pasi ...
Ndeipi mhando yezvipembenene kunze kwejongwe inogona KUTANGA kuenda kune imwe muimba muimba?
Ndezvipi zvipembenene kunze kwemapete zvinogona FAST kumhanya nepasi peimba mufurati? Kune mapete matema. Dzinotaridzika kunge nyuchi dzinojairika, nhema uye zvishoma kupenya. Kusiyana neakajairwa matsvuku uye ...
Fenech ndiani? Iyi imhuka ine nzeve inogara musango. Mhuka inoshamisa inogona kurarama mukati mekupisa, uye kunyange kuvhima. Nzeve hombe rudzi rwevagari vanobata zvishoma zvishoma kufamba kwemasikati emangwana ...
Nei chichena mushroom chichinzi chakanaka?
Nei hohwa chena yakanzi chena chaizvo? Iyo boletus howa inonzi chena kune yayo yakajeka ruvara kunyangwe mushure mekuomesa. Icho chepasi pevhu chehowa chivharo chakajeka muvara, uye chepamusoro chakatsvuka. White howa ndiye mambo ...
Nei pasiworm inoputika?
Nei honye yepasi ichida bristles? Iyo yevhu inoda bristles nechinangwa chimwe icho isu vanhu chatinoda ganda, iko kuchengetedza kwemuviri kubva kune yekunze pesvedzero yezvakatipoteredza, mabhurezi ehonye akakwana ...
Nzira yekutumidza sei pakaPersia?
Chii chaunodaidza kuti Persian katsi? Paunenge uchisarudza zita, zvinodikanwa kusarudza mamwe masangano anogona kukusanganisa iwe semuridzi uye chipfuwo chako, kana kuenderera kubva pane hunhu hunodiwa hwekupa rimwe zita, ...
Ndezvipi zvikamu zvinodikanwa pamasero ezvisikwa zvipenyu zvose?
Ndezvipi zvikamu zvinodiwa kumasero ezvese zvipenyu? Sekufunga kwandinoita kubva munzira yezvidzidzo zvechikoro, sero rine musimboti. Iyo nucleus, zvakare, ine DNA. Goko rinonzi membrane. Cytoplasm - ...
Nei mhou dzinoda nyanga?
Sei mombe ichida nyanga? Ini ndinofunga kuti nyanga dzakapihwa mhou nemasikirwo, chekutanga, kuti vazvidzivirire ivo nevadiwa vavo pamberi penjodzi nemuvengi, uye chechipiri, shanduko yemombe inogona kupa nyanga ...
Sei kate inobata mutsara mumugwagwa uye ichiuyisa kumba?
Sei katsi, yabata mbeva mumugwagwa, inouya nayo kumba? Instinct, anoenda nayo kuna tenzi wake. Kureva, munhu anomupa chikafu. Zvakanaka kuratidza imwe nhanho yekuzvipira. Kuti…
Nei pear chiratidzo chepenyu hurefu?
Nei peya iri chiratidzo chehupenyu hurefu? Zvichida izvi zvinoreva tsika dzechiChinese (pears miti inogara kwenguva refu, inokura kusvika pamakore zana), kune dzimwe nyika ine chirevo chakasiyana. MuAkare Girisi, peya ...
Ko mbatya inogona kurwisa murume nembwa uye nei?
Gava rinogona kurwisa vanhu nembwa uye nei? Gava rakanga risinganzwisisike, sezviri pachena havana kuwana hutachiona. Iko hakuna imwe vhezheni, mweya wakaipa haugone kupinda makava ...
Sei imbwa isingagoni kutapira?
Sei imbwa isingagone kudya zviwitsi? Sezvo nevanhu, zvihwitsi zvinokanganisa mazino embwa yako. Shuga inobvisa calcium kubva pamazino, ivo vanozoita brittle, uye pakarepo putrefactive mabhakitiriya anotanga basa ravo, kukura ...
Chii chinoumbwa muzvirimwa panzvimbo yehuva?
Chii chinogadzirwa muzvirimwa panzvimbo yeruva? Nomuzvarirwo - fetal ovary, kana budiriro yekusangana yakaitika. Ini ndinofunga idzi imbeu, (kana aya maruva, semuenzaniso) mabhokisi ane mhodzi, dzinogona kubva dzaibva ...
Nzira yekudzidzisa sei kati kuti iburuke seri kwechimbudzi?
Sei kudzidzisa kati kumutevera muchimbuzi? Ndinoda chaizvo kuti katsi yangu iende kuchimbuzi nekuzvimhanyisa yega, saka handifanirwe kuchenesa marara bhokisi, ...
Sei makate achiunza mapani mumba?
Sei katsi dzinounza mbeva mumba? Katsi dzinounza mumba kwete chete dzakatorwa mbeva nehuku dzevamwe vanhu, asiwo zvitunha zvemakonzo, kazhinji atova hafu yadyiwa. Iko kuona kunosemesa, asi kati ...
peji 1 peji 2 ... peji 249 Next Page
Mibvunzo ye50 mu database yakagadzirwa mu 0,491 masekondi.